Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa haayadda Unicef ayaa maanta tobabar usoo xidhay maamulayaasha xarumaha lagu daryeelo caruurta agoonta ah. – MESAF
News & Events News Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa haayadda Unicef ayaa maanta tobabar usoo xidhay maamulayaasha xarumaha lagu daryeelo caruurta agoonta ah.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa haayadda Unicef ayaa maanta tobabar usoo xidhay maamulayaasha xarumaha lagu daryeelo caruurta agoonta ah.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa haayada unicef ayaa maanta tobabar usoo xidhay maamulayaasha xugsiyada lagu hayo caruurta aan lahayn waalidka.
Tobabarkaa oo ku saabsana kobcinta iyo kor u qaadida xaaladaha nololeed ee caruurta iyo xuquuqaadka ay leeyihiin caruurtasu
Wasaaradda ayaa guud ahaamba wada dadaalo kor loogu qaadayo heerarka nololeed ee guud ahaamba xarumaha caruurta lagu daryeelo.
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland mudane Cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ayaa soo xidhay tartan ciyaareed ay wasaaradu u qabatay caruurta darba jiifka ah